KDE The soon iyo xarrago leh ee furanSUSE 13.2 Harlequin - Shabakadaha SMB | Laga soo bilaabo Linux
KDE The Fast and Elegant KDE in openSUSE 13.2 Harlequin - Shabakadaha SMB
phico | | Shabakado / Adeeg
Ujeedada ugu weyn ee qoraalkan ayaa ah in la muujiyo sida aan ku gaari karno Desktop - desktop saldhig leh qaabeynta ugu yar ee bilowga ah, maadaama aan horey u haysanno a DNS - DHCP shabakadda, umana baahnin inaan gacanta ku dhigno isku xirnaanta shabakadda.
Waxaan go'aansanay inaan kumbuyuutarka ku sameysano nooca furanSUSE 13.2 Harlequin, oo ha sugin wixii intaa ka dambeeya gaaritaanka DVD-ga rakibidda iyo meelaha lagu keydiyo nooca 42.2 Boodbood. Sida ku cad waxa uu saaxiibkay iyo saaxiibkay ii sheegay, Ing. Eduardo Noel Núñez, habka rakibaadda kuma kala duwana inta udhaxeysa noocyada inkasta oo boodboodka tirada ah ee tilmaamaya
1 Ku rakibidda tallaabo-tallaabo ah sawirrada
1.1 Taageerada rakibaadda
1.2 Rakibaadda, ku dhawaaqida keydadka iyo cusboonaysiinta nidaamka
2 Dejinta kale ee bilowga ah
Ku rakibidda tallaabo-tallaabo ah sawirrada
Waxaan qabanay wadarta 51 shaashad si aan uga tarjumno Tallaabo Tallaabo sida ugu macquulsan. Mid kasta oo ka mid ah shaashadda rakibidda, furanSUSE Waxay ka dhigeysaa shaqadeena mid sahlan iyadoo jiritaanka badhanka Caawinta - Ka caawi badanaa ku yaal bidix hoose.
Sharaxaad kama bixin doonno shaashad kasta oo loo arko inay tahay mid aan loo baahnayn. Horaa loo yidhi, «Sawirku waa kun eray«.
Waxaad arki doontaa sawirro badan oo la mid ah kuwa lagu qabtay hore boostada, laakiin waa mudan tahay inaad ku muujiso dhammaantood midkan, sidaa darteed maahan lagama maarmaan in laga gudbo hal bog bog kale. Tani waa sida aan u fududeyno akhriska.
Ka dhexdhexaadin ahaan waxaan u adeegsanaa sawirka DVD-ga furanSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso. Haddii qalabku aanu haysan DVD player, ama haddii ay noogu habboon tahay isticmaalka xusuusta - wadid qalin, waan sameyn karnaa sida lagu muujiyey maqaalka Autostart xasuusta si loogu rakibo Debian, CentOS, ama openSUSE. Ka dib marka nidaamka hawlgalka la rakibo, barnaamijka waa la rakibi karaa oo loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo xusuusta Qoraa SUSE Studio.
Si kastaba ha noqotee waxaan soo jeedinaynaa tijaabi markii hore mashiin dalwaddo ah.
Rakibaadda, ku dhawaaqida keydadka iyo cusboonaysiinta nidaamka
Waxaan soo jeedinaynaa loogu talagalay mashiinka farsamada emepeuse-desktop.fromlinux.fan qiyaastii 768 megabyte oo RAM ah iyo 20 - 80 GiB adag ah, waxay kuxirantahay sida loo isticmaali doono iyo haddii aad rabto inaad isku daydo inaad ku ciyaarto faylal badan oo badan.
Waxaan aqbalnaa ugu dambeyn Soo Jeedinta Qeybinta oo ay bixiso barnaamijka rakibaadda, iyada oo calaamad u ah kalsoonida waayo-aragnimada OpenSUSE ee dhinacyadaas.
Haddii aadan marka hore tijaabin doonin mashiin dalwad ah oo aad go'aansato inaad si toos ah ugu sameyso desktop-kaaga, Aad uga taxaddar in aanu lumin xogta jirta dirawaladaada adag. Aad uga taxaddar oo leh Nidaamka Faylka - Nidaamka Faylka la xushay. Aad uga taxaddar iyada oo aan la badalin Nidaamka Faylka ee qayb ka mid ah xogta, oo aanad qaabayn.
In kasta oo aan tusno kombuyuutarrada suurtagalka ah in la xusho, ugu dambayntii waxaan doorannaa kan KDE. Waxaan aaminsanahay in adeegsiga kumbuyuutar aan ahayn KDE ee a OpenSUSE Desktop, dhammaantood waa ixtiraam la'aan Kooxda OpenSUSE. 😉 Sikastaba, si xor ah u dooro midka aad doorbideyso iskuna day.
Magaca isticmaalaha la doortay «buzz»Waa in la sharfo Debian, qaybintayada ugu jecel. Laakiin waxba. 😉
Qaado waqtigaaga doorashada barnaamijka softiweerka ah. Maareeyaha Xirmada ee cajiibka ah ayaa mudan in la maro, sida ka muuqata sawirrada 13, 14, 15 iyo 16.
Sawirro 24, 25 iyo 26Markaad rakibto nidaamka qalliinka DVD-ga ama warbaahinta kale, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa bedelidda magaca kombiyuutarka iyo cinwaanka sida loogu baahdo. Magaca domainku muhiim maahan sida loo dhigay iyada oo loo marayo server-ka DHCP ee LAN. Waxaan si cad u sameynaa tan si looga fogaado khaladaadka.
Sawirada 27, 28, 29, 30, 31 iyo 33: Ku dhawaaqida keydadka si loo casriyeeyo nidaamkayaga, ha noqdo mid maxalli ah ama mid internetka ah. Sidii aan ku sameynay maqaalka hore Waxaan joojineynaa keydadka kala duwan ee OpenSUSE ay ku bixiso server-keeda internetka, waxaanan ku darnaa kuweena Local. Magac ahaan, waxaan ku sii wadaynaa isla keydadkii: database, Packman, updates, Oss y Aan Oss, si aad nooga dhigato miis leh sharciga oo dhan. Way na cafiyaan haddii xirmo yar la waayo oo ay tahay in la baaro oo laga helo internetka. 😉
Sawirro 35, 36 iyo 37: Wuxuu bilaabaa oo dhammeeyaa cusbooneysiinta Maareeyaha Xirmada YaST. Shaashadda ugu horreysa waxaan uga tagaynaa xulashooyinka caadiga ah. Waxaan riixnay batoonka Codso.
Sawirada 38, 39, 40, 41, 42 iyo 43: Kadib markii Maamulaha Xidhmada uu iskiis u cusbooneysiiyo, wuxuu bilaabayaa shaashadda xirmooyinka ka imanaya nidaamka intiisa kale si loo cusbooneysiiyo. Dhexdeeda, waxaan sidoo kale aqbalnaa xulashada caadiga ah.
Sawir la'aan: Kamaanaan qaban shaashadaha nidaamka dib-u-bilaabidda nidaamka ee ah in la sameeyo marka xigta, iyo habka galitaanka, iyada oo la tixgelinayo iyaga oo si fiican u yaqaan kuwa jecel KDE. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad aragto sawirka galitaanka, fadlan ku raaxee Sawirka 21. 😉
Dejinta kale ee bilowga ah
Sawirro 44, 45 iyo 46: Waxaan ku dhawaaqeynaa Firewall - Dab-damis in isku xirka shabakada eth0 adaa iskaleh Aagga Gudaha ama LAN-da SME-ga.
Sawirada 47 iyo 48: Waxaan dib u eegnay oo aan rakibnay alaabooyin dheeri ah oo OpenSUSE ku talinayso. Ma aha tallaabo khasab ah, laakiin waa lagu talinayaa.
Sawirada 49 iyo 50: Safarka ugu yar ee sida loo yaqaan Nidaamyada Dookhyada ee deegaanka desktop desktop KDE.
51 image: Ku dar ama ka saar barnaamijyada adoo adeegsanaya moduleka YaST.
Waxaan kugu sugeynaa hal-abuurka soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » KDE The Fast and Elegant KDE in openSUSE 13.2 Harlequin - Shabakadaha SMB
Warqad Fiican…. Hambalyo
Waan ka saarey Openuse kumbuyuutarka desktop-ka, maxaa yeelay waqti kadib wuxuu kudhamaaday qaybinta nidaamka oo buuxa mana nadiifin kari waayey, aakhirkii waxaan kudhameystey inaan dhigo kde neon oo aad uwanaagsan sababtoo ah kde neon waxay ku fadhiyaan oo kaliya 9G waxkasta oo rakiban. Laptop-ka waxaan ku leeyahay manjaro kde, sidoo kale waa wax fiican waadna nadiifin kartaa nidaamka sida kde neon.
Ku jawaab carlidov
Waan bogaadinayaa qodobbada aan ku saabsaneyn Debian, Arch, ama Ubuntu.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan u qoray maqaallo software bilaash ah baraha bulshada reer Uruguay ama baloogyada, mar walbana waxaan ugu yeeraa "Wixii Linux ah", ee ma ahan Fedora, oo ah qaybinta aan marwalba isticmaalo ka hor inta aanan isticmaalin Mac. waxay qaadataa xorriyadda suurtagalka ah ee "bilaashka ah" softiweerka ay dad badani ku dhawaaqaan, maadaama dadka aan fikrad badan haysan ay ka dhigan tahay in barnaamijkani uu ka shaqeyn doono oo keliya Ubuntu tusaale ahaan, iyo haddii midka OpenSUSE uusan lahayn fikrad badan oo aad ku jirto dhamaadka aakhiro.
Alejandro TorMar: Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga iyo qiimeynta maqaalka. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad nala sii wado taxanaha PYMES.
Carlidov: Waxaan ku rakibay BleachBit labadaba dns.fromlinux.fan, iyo sidoo kale in Openuse-desktop.fromlinux.fan, labada xaaladoodna waxay nadiifisay qeybta (s) halka nidaamka qalliinka lagu rakibay in ka badan 180 megabyte. Ikhtiyaarka aan doortay wuxuu ahaa "BleachBit sida Maamulaha". Marti geliyaha dns.fromlinux.fan wuxuu ahaa kii aan ku rakibey:
Gonzalo Martínez: Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga daacad ah. Maqaalka:
Waxaan kuu sharraxeynaa sababta aan u dooranay Debian, CentOS, iyo OpenSUSE distros ee taxanaha taxanaha SMB. Debian waa Universal, halka CentOS - Red Hat, iyo openSUSE - SUSE ay yihiin ganacsato ku jahawareersan fikradaha qaar badan oo ka mid ah dadka wax qora ee wax qora iyo kuwa ilaaliya iyo kuwa kafaala qaadayaasha ah. Waxaan ka qornay laba maqaal oo ku saabsan labadii disho ee ugu dambeysay, qaab loo soo bandhigo, waxaan kugu martiqaadayaa inaad aqriso, haddii aadan horey u helin. Kuwani waa:
Markii aan wax ka qorayno Debian, waxaan wax ka qornaa aabbaha qoys weyn iyo xirmooyinka .deb. Markii aan ku sameyno CentOS - Red Hat, isla waxbaa dhaca, laakiin xirmooyinka .rpm.
Xulashada distros-ka gabi ahaanba xaflad ma aheyn. Waxay ku salaysnayd caqliga saliimka ah. Shakhsiyan, ma dabooli karo qaybinta intaa ka badan si aan wax uga qoro adeegyada isku xidhka shabakadaha SMB, maxaa yeelay waxaan qabaa inaan waali doono. 😉
Dhankeyga, waxaan kugu martiqaadayaa inaad u qorto, isla blog-ka DesdeLinux, oo ku saabsan waxyaabaha loo yaqaan 'distros' ee aynaan wax ka qaban, maadaama aad muujisay inaad sameysay munaasabadihii hore. Waxaan rajaynayaa in Luigys Toro, maamuleheena, ay isku si u fikiraan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku darsado, in kasta oo 2 sano ka hor aan u wareegay Mac oo aan adeegsado OS X inta badan, wali waxaan u adeegsadaa shaqo (shaqadayda iyo dhowr VPS oo leh mashaariic shaqsiyadeed qaarkood).
FromLinux waa daaqad u furan qofkasta oo doonaya inuu aqoontiisa uga biiriyo barashada bulshada. Khibrada urursan ee qorayaashu waa tan u oggolaanaysa dad badan oo khibrad leh iyo khabiiro meelo kala duwan ah inay ku guuleystaan ​​hawlo badan oo ka wanaagsan oo la xiriira Linux
Sida loo rakibo Vesta Control Panel daqiiqado gudahood